Iwu nyocha na iwu nzuzo na Asia - Ngwọta OMG
Nsogbu kasịnụ nke ngalaba ndị uwe ojii na-eji kamera ndị uwe ojii na-ahụ maka onwe ha, bụ na n'ọnọdụ ọnọdụ nrụgide, Onye ọrụ na-echeta ihe ndekọ igwefoto ahụ. Eleghị anya, n'okpuru nrụgide, Onye ọrụ ahụ anaghị echetakwa na ọ na-eji igwefoto ma yabụ na-efunahụ ihe ngosipụta eserese nke gụnyere ịnwe vidiyo na ụda olu nke ndị uwe ojii.
Otu n'ime nsogbu nsogbu dị na nchekwa bụ onye na - achịkwa anyị na otu esi. "Nke a bụ teknụzụ nwere ezigbo ikike ije ozi dị ka ikike na ime ka ike uwe ojii,"
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ itinyeghị ndị uwe ojii na-enweghị mwakpo anụ ahụ: ime ihe ike megide ndị uwe ojii na-abawanye. Igwe na-akpọ kamera ahụ kwesiri inye aka belata ya. Igwefoto ndị ahụ, nke eji uwe ojii, na-edekọ ọgụ ma na-arụ ọrụ dị ka ụzọ nrụgide, yana iji hụ na akaebe.
Ndị uwe ojii nwere ike rụọ ọrụ ha oge ọ bụla enwere egwu nke ime ihe ike ma ha nọ n'ihu ọha. Ihe ha ga - eme bụ ịgwa onye ahụ metụtara na a ga - edekọ ihe niile na vidiyo. Ọtụtụ mba Esia ejirilarị igwefoto ahụ. Agbanyeghị na nrụgide nke ndị na - echedo data, bụ ndị na - ahụ ikike bụ isi nke mkpebi onwe Dabere na ndị uwe ojii, nsonaazụ ahụ buru oke ibu: ọtụtụ ndị na-awakpo modera modera, ma ụlọ ikpe na-esote ya dịkwa mfe na ndekọ. N'otu oge, enwere ike ịlele ma ndị uwe ojii n'onwe ha emeela nke ọma.
Ihe kachasị mma banyere igwefoto ndị uwe ojii bụ na ha na-ejide ihe osise nke nzukọ ndị uwe ojii na ndị otu, gụnyere ndị a na-enyo enyo, ndị akaebe na ndị na-agafe agafe. Ndekọ a na - enyere aka mee ka ndị otu a niile bụrụ ndị na - eme ihe n'eziokwu ma mee ka ha nweta ntụkwasị obi, ebe ha maara na ihe ọ bụla mmadụ kwuru gbasara mmekọrịta ahụ enwere ike ịnwale.
Enwere ike ịnwe uru nchekwa ọhaneze maka teknụzụ ndị ọzọ: ihu ihu. Inwere ike nyochaa njirimara nke mmadụ iji tulee ha na profaịlụ echekwara na nchekwa data, dị ka ikikere nke Ngalaba nke ugboala. Enwere ike iji dijitalụ “ụdị mkpụrụ aka” mepụtara site na iji usoro ihe onyonyo emere iji nyere ndị mmadụ aka na-arịa ọrịa Alzheimer, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ndị omempụ na-enyo enyo, ma ọ bụ onye ọ bụla.
Ugbu a, ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-achọ ikpokọta teknụzụ abụọ ahụ, na-etinye ihe ndekọ igwefoto ahụ site na nyocha nyocha ihu.
Nke ahụ ga - eme ka onye uwe ojii ọ bụla bụrụ ihe ọ bụla.
Ọ ga - eme ka ahụ ọ bụla nwee ebe ọ ga - anakọta, chekwaa ma nyochaa data nke onwe ya n'enweghị ikike nke isiokwu edere. Ọ ga - emekwa ya ọbụlagodi na enweghị ndị a na-enyo enyo na ha mere ihe ọjọọ.
Enwere ike iji ya mata ihu ihu, ya na ihe onyonyo ahu. Nwere ike soro ebe onye ọ bụla nọ n'oge ọ bụla ma debe data ahụ na ndekọ na-adịgide adịgide maka iji mesịa. Enwere ike iji ya maka ịlele obodo niile. Ọ bụ echiche jọgburu onwe ya. Ọ ga-emebi ebumnuche niile nke igwe mmadụ, nke bụ ime ka ndị uwe ojii nweghachi ntụkwasị obi.
Teknụzụ n'onwe ya bụ naanị teknụzụ: ngwaọrụ dị iche iche na-eme ka ike mmadụ dịkwuo elu. Igodo nke abamuru ya na ihe ojoo ya bu iwu nke kwuputara etu agaesi gosiputa ike. Dịka ọmụmaatụ, igwefoto anụ ahụ nwere ike iwepu ngwa ngwa, karịa ịba ụba, ntụkwasị obi ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii ga-enwe ohere ịnweta onyonyo ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịchịkwa ojiji ha. N'ihi ya, Ngalaba ndị uwe ojii na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nakweere iwu ndị chọrọ ka ekpughere ọha mmadụ foto ndị eserese kamera weghaara n'ime izu ole na ole nzukọ. Islọ omebe iwu mere otu ihe mere n'afọ gara aga site n'inye iwu na ụlọ ọrụ mmanye iwu ọ bụla nke na-eji kamera ahụ na-eme ka onyonyo a ghara iru ọha. Ndị omebe iwu na-atụle ugbu a ụgwọ nke ga-amachibido iji teknụzụ ihu ihu yana foto ihe osise.
Groupsfọdụ ndị uwe ojii na-emegide iwu ahụ n'ihi na steeti ekwesịghị igbochi ha iji ngwaọrụ ndị na-eme ka ọgụ megide mpụ na njirimara nke ndị mebiri iwu.
Ma enwere nguzozi nke ndi mmadu gha agharo iru n'etiti ihe nzuzo: inwere onwe ya na ntinye nke nzuzo na ndu nzuzo na ijide n'aka na ichoo onye uwe ojii aputaghi na itinye onwe gi na nchekwa data dijitalụ obula. O doro anya na amamịghe ịgbara ọhụrụ ọhụụ ma ọ bụ teknụzụ na-eyi egwu egwu, mana anyị niile nwere ike irite uru site na iche echiche karị.
Ọzọkwa, ụdị ụfọdụ nke ịmụrụ anya ka eji ebi ndụ ugbu a ma na-aga n’ihu ebe niile. N'oge a ị nwere ike ịkwụ ụgwọ dollar ole na ole maka igwefoto nchekwa na-ejikọ na Internetntanetị nwere ike ịgwa gị, ebe ọ bụla ị nọ, onye nọ n'ọnụ ụzọ gị. Kinddị teknụzụ ahụ agaghị akwụsị.
Nwekwara ike ịkekọrịta ihe onyonyo ndị ahụ na ngalaba uwe ojii mpaghara gị, nke ị nwere ike iji maka nchekwa ọha ma ọ bụ ebumnuche gị. Ọtụtụ ohi ndị ohi jidere ihe ọhụụ site na iji ihe onyonyo ndị uwe ojii kerịta.
Mana ekwesịrị ka ndị ọrụ nke sistemụ ahụ kọọ ndị uwe ojii na onyonyo? Nke ahụ bụ ihe ọzọ dị iche kpamkpam. Ekwesiri imebe iwu iji hụ na teknụzụ, yana gọọmentị, na-ejere ọha mmadụ ozi ọ bụghị nke ọzọ.
Togwọ nke machibidoro iji teknụzụ ihu mmadụ na kamera ndị uwe ojii na-eme ka ọha na eze na -echebe. Ọ bụ mgbakwunye ebumnuche sitere na ụgwọ nke afọ gara aga iji hụ na ọha na-emesị nweta ihe ndekọ igwefoto ahụ. Ọ na-ahụ na igwefoto ahụ na-arụ ọrụ dịka eburu n'uche, iji nwekwuo ntụkwasị obi na ndị mmanye iwu, kama ịnyefe ikike nke teknụzụ ọha na ndị uwe ojii.
Otu n'ime nsogbu nsogbu dị na nchekwa bụ onye na - achịkwa anyị na otu esi. "Nke a bụ teknụzụ nwere ezigbo ikike ije ozi dị ka ikike na ime ka ike uwe ojii," \_
Enwere ike ịnwe uru nchekwa ọhaneze maka teknụzụ ndị ọzọ: ihu ihu. Inwere ike nyochaa njirimara nke mmadụ iji tulee ha na profaịlụ echekwara na nchekwa data, dị ka ikikere nke Ngalaba nke ugboala. Enwere ike iji dijitalụ “ụdị mkpụrụ aka” mepụtara site na iji usoro ntanetị mee ihe iji nyere aka ịchọta ndị furu efu na ọrịa Alzheimer, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ndị omempụ na-enyo enyo, ma ọ bụ onye ọ bụla.
Enwere ike iji ya mata ihu ihu, ya na ihe onyonyo ahu. Nwere ike soro ebe onye ọ bụla nọ n'oge ọ bụla ma debe data ahụ na ndekọ na-adịgide adịgide maka iji mesịa. Enwere ike iji ya maka ịlele obodo niile.
Ọ bụ echiche jọgburu onwe ya. Ọ ga-emebi ebumnuche niile nke igwe mmadụ, nke bụ ime ka ndị uwe ojii nweghachi ntụkwasị obi.
Teknụzụ n'onwe ya bụ naanị teknụzụ: ngwaọrụ dị iche iche na-eme ka ike mmadụ dịkwuo elu. Igodo nke abamuru ya na ihe ojoo ya bu iwu nke kwuputara etu agaesi gosiputa ike. Dịka ọmụmaatụ, igwefoto anụ ahụ nwere ike iwepu ngwa ngwa, karịa ịba ụba, ntụkwasị obi ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii ga-enwe ohere ịnweta onyonyo ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịchịkwa ojiji ha. N'ihi ya, Ngalaba ndị uwe ojii na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nakweere iwu ndị chọrọ ka ekpughere ọha mmadụ foto ndị eserese kamera weghaara n'ime izu ole na ole nzukọ. Islọ omebe iwu mere otu ihe mere n'afọ gara aga site n'inye iwu na ụlọ ọrụ mmanye iwu ọ bụla nke na-eji kamera ahụ na-eme ka onyonyo a ghara iru ọha.
Ndị omebe iwu na-atụle ugbu a ụgwọ nke ga-amachibido iji teknụzụ ihu ihu yana foto ihe osise.
Ikpuchi iwu na nzuzo na Asia gbanwere ikpeazụ: December 12th, 2019 by admin